Muuri News Network » Daawo video:Madaxweyne Farmaajo oo si Rasmi ah Ula Wareegay Xarunta Madaxtooyada
Daawo video:Madaxweyne Farmaajo oo si Rasmi ah Ula Wareegay Xarunta Madaxtooyada
Waxaa maanta Madaxweynaha cusub ee Somaliya mudane, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) uu si rasmi ah ula wareegay furaha xarunta Madaxtooyada ee Villa Somalia, kadib markii uu maalmo ku shaqeynayay Hoteel Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Xaflad kooban oo saakay ka dhacday xarunta Villa Somaliya ayaa Madaxweyne Farmaajo xilkaasi uu kula wareegay, kadib markii Madaxweynihii hore ee Somaliya mudane, Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka wareejiyay.
HALA KAAN KA DAAWO MUUQALKA
Xafiiska Shaqada Madaxweynaha ayaa la soo dhigay Qalab kala duwan oo intii Madaxweyne Xasan uu xilka haayay hadiyado ahaan loogu keenay magaca qaranka Soomaaliya, waxaana la tusay Saxaafadda, iyadoo qalabkaasi ay ka mid ahaayeen agab ka sameysan Dahab iyo Qalin.
Madaxweynihii hore ee Somaliya ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay maanta inuu si rasmi ah u wareejiyo xilka xarunta madaxtooyada Soomaaliya, wuxuuna sheegay in Soomaaliya uu u baryay waa cusub, islamarkaana dalka uu galayo horay u socod.
Madaxweynaha cusub ayaa isgana u mahad celiyay dowladii madaxweyne Xasan Sheekh isaga oo Shegay in dalka ay soo gaarsiisay meel ka wanaagsan meeshii ay tiilay 2012-kii.
Mahad celinta kadib waxa uu madaxweyne farmaajo madasha ka sheegay in dowladdan ay tahay tii shacabka Soomaaliyeed ay doonayeen, wuxuuna bulshada ugu baaqay inay kala shaqeeyaan dowladiisa, suggida amniga iyo horumarinta dalka.
Maalinta arbacada ah ee 22-ka Bishan feebaraayo ayaa lagu wadaa inay si rasmi ah u dhacdo Xaflada Caleemo Saarka Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.